Ahụmahụ Semalt: 7 Scams Internet na Otu esi zere ịdakwasị ha
Swindlers nwere ike ị na-agbaso gị tweet na post, na-achọ ohere iji ghọgbuo gị. Nke a bụ ụzọ Igor Gamanenko na-enye, Semalt Njikwa Nlekọta Ndị Ahịa, na-eji nke ị nwere ike ịmegharị ngwa ngwa asaa ngwa ngwa na-emepụta nkwonkwo
Onyinye Nkwenye Free! (Nanị ịkwụ ụgwọ maka mgbe ebighị ebi)
Olee otú o si arụ ọrụ: Ị na-ahụ onyinye Web maka nyocha nke otu ọnwa nke ihe ụfọdụ dị ịtụnanya-ọtụtụ mgbe, ndị a bụ ezé ezé ma ọ bụ atụmatụ nlekọta ahụ ike. Ihe niile ị na-akwụ bụ $ 5.95 maka njem na ilekọta.
Ihe na-aga n'ihu: N'okpuru mma, mgbe ọ bụla ị na-ekpuchi anya, ị ga-akwụ ụgwọ $ 79 na $ 99 n'ọnwa na ụgwọ?
Ọ bụghị ezigbo ụtọ Tweet (Ọ bụ ezigbo ogologo gbara)
Olee otú ọ na-arụ ọrụ: Ị nweta "tweet" site na onye na-akwado Twitter, na-eche banyere ihe ịma aka maka iPad ma ọ bụ ihe ọzọ dị oké ọnụ ahịa:
Ihe na-aga n'ihu: Nbudata njikọ ahụ bụ "bot" (robot programming), na-agbakwụnye PC gị na botnet nke "zombies" nke ndị aghụghọ na-eji eziga email.
Nkọwa zuru ezu: Ndị ọrụ nka na-eji URL-ọchịchị mkpirikpi na-enye ndị ahịa Twitter ohere ịkekọrịta
Mpaghara Nsogbu Nsogbu (Ọ dị nso, ezigbo nso)
Otú o si arụ ọrụ: Ị na-anọdụ ala n'ụgbọelu ma ọ bụ kọfịfụ, ị banye n'ime mpaghara Wi-Fi dị nso. O nwere ike ịbụ n'efu, ma ọ bụ na ọ nwere ike ịchọta dị ka ụgwọ akwụ ụgwọ dịka Boingo Remote.
Ihe na-aga n'ihu: saịtị ahụ dị adị n'ezie. Ọ na-eme ka onye omekome na-esote ya na-agba ọsọ site na obere ụlọ ọrụ..
PC gị bu oria! (Kedu ihe ọzọ, anyị nwere ike inye aka)
Olee otú ọ na-arụ ọrụ: windo na-efepụ banyere ezigbo usoro mmemme antivirus dị ka "Antivirus XP 2010" ma ọ bụ "Ngwaọrụ Nchedo," na-eme ka ị mara na e merụla igwe gị na ahụhụ dị ize ndụ.
Ihe na-aga n'ihu: Mgbe ị na - ejikọ njikọ ahụ, nzukọ ụgha ahụ na - ekpughe mmemme mmemme malware-na PC gị.
Ịkpọ maka Dollar (N'iji ụda mgbagwoju anya)
Olee otú o si arụ ọrụ: Ị nweta ozi ozugbo na ekwentị mkpanaka gị site na ụlọ akụ gị ma ọ bụ kwado ụgwọ kaadị.
Ihe na-aga n'ihu: "akụ" bụ onye na-atụ egwu na ị ga-ekpughe ihe ndekọ data gị.
Anyị Bụ Ụwa (Ụwa nke aghụghọ aghụghọ)
Olee otú o si arụ ọrụ: Ị nweta ozi-e na foto nke onye na-anaghị eri nri-site na Haiti ma ọ bụ mba ọzọ na-emepụta. "Ọ ga-adịrị mma ma ọ bụrụ na ị nye ihe ị nwere ike taa," ka arịrịọ nke obi ụtọ na-aga, nke a na-achọ ego.
Ihe na-eme n'eziokwu: Ntinye ego bụ aghụghọ ịchọrọ ego gị na ijikwa data akaụntụ.
Nyocha zuru ezu: Web, email, na ihe ọmụma dị na ya enyewo ndụ ọhụụ iji ghọgbuo usoro aghụghọ afọ 10
Ịhụnanya nwere ike ịzụta (The con brutal con)
Olee otú o si arụ ọrụ: Ị ga-ezute onye na-akpa na saịtị, na Facebook, na ụlọ nleta, ma ọ bụ mgbe ị na-egwu ntụrụndụ.
Ihe na-eme n'eziokwu: Ọhụụ ọhụrụ gị bụ onye ọrụ uzu. A gaghị enwe mmasị na ụgbọelu ụgbọelu, ọ gaghị enwe ọṅụ nke ukwuu.
Nyocha zuru ezu: Mkparịta ụka na-ezighị ezi n'Ịntanet na-emeghewo ụzọ ọhụrụ maka ndị na-eme ihe nkiri na-egbu egbu bụ ndị nwere ahụmahụ bara uru na-adọta ndị mmadụ tọgbọrọ n'efu n'ime njikọ ụgha na mmekọrịta, nanị iji nweta ego ha Source .